Waa tuma gabadha Delle Alli isagoo la socda lagu arkay ee Nicole Berry?…(Miyuu xiriirka u jaray gabadhii Pep Guardiola?) – Gool FM
(London) 24 Okt 2021. Waxaa bilihii ugu dambeeyay warbaahinta Ingiriiska ee kubadda cagta ay hadal-heysa xanta ah inuu xiriir ka dhexeeyo xiddiga naadiga Tottenham Hotspur ee Dele Alli iyo gabadha lagu magacaabo Maria Guardiola oo uu dhalay macallinka Manchester City ee Pep Guardiola.
Hase ahaatee, wargeyska The Sun ee kasoo baxa Ingiriiska ayaa daabacay sawir uu kubbad sameeyaha Spurs la galay gabadha modelka ah ee Nicole Berry taasoo dhunkaneysa gacantiisa xilli ay madaxeeda ku xasilisay garabkiisa waxaana wargeyska uu baahiyay in madashada ay ku wehlinayeen Sofia Cretaro oo saaxiib la’ah Nicole taasoo iyadana gacanta ka heysatay difaac-bidxeedka Chelsea ee Ben Chilwell.
Ilo ku dhow-dhow gabadha modelka ah ee reer Canada ayaa sheegay inay ka faaneyso la hasaawidda xiddigaha kubadda cagta sidaas darteedna uu Alli soo raadiyay kaliya inuu casho kula kulmo, iyaduna ay afar farriin kaddib u jawaabtay inay waqti soo wada qaataan.
Dhinaca kale, af-hayeen u hadlay xiddiga xulka qaranka Ingiriiska ayaa dafiray inuu xiriir ka dhexeeyo 25-sano jirkan iyo Nicole, hase ahaatee, ay si koox ah casho ugu wada qaateen huteelka Sexy Fish ee ku yaalla magaalada London ee caasimadda England kahor inta aysan u hayaamin halka lagu magacaabo Chiltern Firehouse.
Sidaas darteed, hadalka af-hayeenka u hadlay Alli ayaa meesha ka saaraya inuu la haasaawayo gabadha Canadian-ka ah, hase ahaatee, af-hayeenku ma uusan caddeyn inuu laacibka Spurs la hasaawayo Maria Guardiola iyo in kale, sidaas darteed, waxaa loo aqoonsan yahay doob maadaama uusan si baahsan u shaacin lammaanihiisa nolosha.